Gift Phiri of the Daily News sits down for a wide-ranging interview with 39-year-old businessman Frank Buyanga. Find below excerpts of the interview. Q: I understand you commenced your entrepreneurial …
Local socialite Pokello Nare, who is being divorced by her Ghanaian husband Elikem Kumordzie, has now filed her papers to challenge the matter at the High Court, setting the stage …
Flamboyant businessman Genius “Ginimbi” Kadundure’s Instagram live account he refers to as “Ginimbi TV” has been temporarily blocked for abuse of the platform. The platform was shut down on Tuesday …
TO demonstrate how serious he was when he vowed never to sing again, self-exiled musician Lovemore “Majee” Majaivana rejected Oliver Mtukudzi’s plea for him to come back home for a …
Former Zimbabwe President Robert Mugabe’s son-in-law is wanted by police on allegations he detained a senior airline company official against her will, a newspaper reported. Simba Chikore allegedly had Zimbabwe …
The night is always darkest before dawn. The people of Zimbabwe should bear with the Government, that while it is trying to resuscitate the economy that has been battered for …
THE case in which businessman Frank Buyanga fraudulently sold a Harare businessman’s Mabelreign house after being given the title deeds as loan surety was last week postponed to tomorrow for …